SAMBO NITONDRA SOKATRA : Notsoahina teo am-pelatanan’ny Polisy ny raharaha ka natolotra ny Zandary
Noraisin’ny Zandarimariam-pirenena ao Morondava an-tanana ary naverina ny fanadihadiana mahakasika ny fanjavonan’ireo sokatra velona miisa 59. 16 janvier 2018
Mpanao gazety roa mianadahy no voaantso natao famotorana teny amin’ny Biraon’ny Zandary tao an-toerana, omaly maraina, mikasika ity tranga ity satria izy ireo no voalaza fa nahazo loharanom-baovao voalohany sy nahita maso ny fanisana ireo sokatra velona izay niisa 282. Rehefa tonga teny am-pelatanan’ny Sampan-draharahan’ny tontolo iainana kosa dia nilaza izy ireo fa 217 isa.
Niovaova hatrany ny tarehimarika amin’ny tena isan’ireo sokatra velona. Tsy nipetra-potsiny anefa ireo mpanao gazety roa fa niroso tamin’ny fanadihadiana lalina manoloana ny fihenan’ireo biby atahorana ho lany tamingana. Nandray andraikitra avy hatrany ireo solontenam-panjakana sasantsasany tao an-toerana ka niroso tamin’ny fivoriana, ny sabotsy teo, niarahana tamin’ireo olona mifandray mivantana amin’io raharaha io. Tapaka nandritra izany ny fanolorana an-tanana ny zandary ny raharaha ary ireo mpanao gazety roa nantsoina voalohany natao famotorana nanazava ny zavatra hitan’ny mason’izy ireo.
Noho izany dia mafampana tanteraka ny mahakasika ny fanjavonan’ ireo sokatra 59 isa ireo ao Morondava ankehitriny ary ahiahiana ho maromaro ny olona voasaringotra. Raha tsiahivina dia ny talata 9 janoary teo no nahatratrarana sambo nitondra sokatra an-tsokosoko tao amin’ny ranomasin’i Morondava. Fantatra fa avy any Maintirano hitondra ireo biby hihazo an’i Mahajanga ilay sambo ka nafefiky ny rivotra tany Morondava. Ny mponina teny amin’ny manodidina nampandre ny mpanao gazety noho ny fisiana fofona maimbo tamin’io sambo io ary izy ireo kosa nampandre mpitandro filaminana hahazoana fahazoan-dalana misava ny sambo.